Izindatshana zikaJason Oakley Martech Zone |
Imibhalo nge UJason Oakley
UJason Oakley unguMqondisi Wezokumaketha Komkhiqizo eChili Piper. UJason ungumakethi womkhiqizo onolwazi onothando lomkhiqizo, i-SaaS, ezamabhizinisi, nempumelelo yamakhasimende. Eminyakeni eyi-10 esebenza ekuqaleni okuncane kuya kokulingene, uJason ube nethuba lokukhombisa impumelelo emisebenzini eminingi ebalulekile yokuthengisa nokumaketha, emenza abe ngumkhangisi womkhiqizo onekhono ofuna ukuqonda lonke uhambo lwamakhasimende.
NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 1, 2020 UJason Oakley
Ngizama ukukunikeza imali yami - kungani uyenza ibe nzima kangaka? Lokhu kungumuzwa ovamile kubathengi abaningi be-B2B. Kungu-2020 - kungani sisachitha isikhathi sabathengi bethu (kanye nesethu) ngezinqubo eziningi zasendulo? Imihlangano kufanele ithathe imizuzwana ukubhuka, hhayi izinsuku. Imicimbi kufanele ibe yezingxoxo ezizwakalayo, hhayi ukuphathwa yikhanda. Ama-imeyili kufanele aphendulwe ngemizuzu, angalahleki ebhokisini lakho lokungenayo. Konke ukuxhumana okuhambisana ne-